Hargeysa: Ciidamada RRU oo is rsaaseyn kadib xiray wasiir ku xigeenkii hore ee Amniga – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Hargeysa: Ciidamada RRU oo is rsaaseyn kadib xiray wasiir ku xigeenkii hore ee Amniga
30th May 2014 A warsame Af Soomaali 0
Hargeysa – Mareeg.com: Wasiir ku-Xigeenkii hore ee Amniga Somaliland, Cabdilaahi Abokor Cismaan ayaa xalay saqdii dhexe xabsiga loo taxaabay ka dib markii ciidamada Booliska iyo kuwa sida gaarka ah u tababaran ee RRU-du ay weerar ku qaadeen gurigiisa oo ku yaala Xaafada 26-ka Juun.
Wararka ka imaanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in xalay ay guriga wasiirka hore tageen ciidamada booliska si ay usoo xiraan, hase ahaatee ay iska cabin kala kulmeen ilaaladiisa.
Markii ay is mari waayeen booliska iyo ilaalada Cabdilaahi Abokor ayaa waxaa arrinta soo farageliyey ciidamo si gaar ah u tababaran oo loogu yeero RRU, waxeyna u dhaceen gurriga, iyagoo halkaas ka qabtay siyaasiga la doonayey.
Warar ayaa tibaaxaya in iska hor-imaadka uu ku dhaawacmay mid kamida ilaalada wasiirka iyo sida oo kale mid kamida ciidamada maamulka Somaliland.
Wasiir ku xigeenka hore ee la xiray Cabdilaahi Abokor Cismaan ee xalay sida xoogga ah loo xiray ayaa dhawaan ku eedeeyey qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda Siilaanyo iney xiriir la leeyihiin argagixiso.
Cabdilaahi Abokor Cismaan ayaa sidoo kale ku lug lahaa khilaafka u dhaxeeya xisbiga Kulmiye, wuxuuna la safnaa garabka Muuse Biixi Cabdi, waxaana maalin ka hor looga yeeray inuu yimaado Xarrunta CID-da si su’aalo loo weydiiyo.
Weerar dad lagu laayey oo dhacay Wajeer, Woqooyi Bari Kenya
Alshabaab oo saddex ruux ku toogtay degmada Buulo Mareer ee Sh.Hoose